Ny firafitra sy ny fahombiazan'ny telefaona vonjy taitra ambanin'ny tany-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Ny firafitra sy ny fahombiazan'ny telefaona vonjy taitra any ambanin'ny tany
FIAINANA: 2021-01-19 HITS: 2
Telefaona manokana ho an'ny metro: Ity telefaona vonjy taitra ity dia ampiasaina amin'ny lalana, metro, tionelina, sns. Ny akorandriaka dia vita amin'ny firaka aliminioma ary misy bokotra miantso, izay afaka misoroka ny herisetra sy ny tontolo masiaka ivelany. Ny vokatra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny telefaona eropeana sy britanika rehetra, ary manana laharana IP65-67 tsy misy rano. Manana fitoniana tsara amin'ny tontolo masiaka izy io.
Endri-javatra amin'ny metro telefaona vonjy maika ： 1. Network: Frequency GSM: 850/900/1800 / 1900MHZ 2G, 3G, CDMA, WCDMA,
Na TYPE IP
2. Maneno ny antso an-tariby: amin'ny alàlan'ny mpandahateny voaorina; 3. Fomba famatsiana herinaratra: batterie lithium rechargeable 9V / 14Ah, tontonana ivelany amin'ny masoandro: 12V / 30W; 4. Fotoana firesahana voafetra: ny halavan'ny fotoana dia azo fidina, ity fampiasa ity dia azo fidina; 5. Tontolo iainana miasa: -30 ℃ ~ + 75 ℃; 6. Mamandoana: 10% -95%; 7. Fijoroana bateria lithium natsangana: 21 andro, afaka hitarina hatramin'ny 42 andro; 8. Fotoam-pifanakalozan-kevitra amin'ny batterie lithium natsangana: 56 ora, azo hitarina hatramin'ny 100 ora; 9. Tatitra tsy fahombiazana: ny toe-javatra tsy fahombiazana dia alefa avy hatrany amin'ny alàlan'ny sehatra SMS. Toy ny: herinaratra ambany, karatra fanalahidy, famatsiana herinaratra AC tsy mahazatra, hazavana LED tsy mahazatra; 10. Jiro LED ivelany, ny telefaona dia misy fitaovana mpitsikilo hahafantarana andro aman'alina, maty tampoka ny hazavan'ny andro, ary ny jiro LED alina dia mandeha ho azy; 11. Azonao atao ny misafidy ny miantso rehefa avy naka ny telefaona ary manindry ny bokotra haingam-pandeha 3 mba hisorohana ny zaza tsy hiantso tsy nahy.
Rafitra sy fahombiazan'ny telefaona vonjy taitra ambanin'ny tany 1） Fampisehoana:
1. Miaraka amin'ny laharana fiantsoana mandeha ho azy mandeha ho azy; 2. Ny laharan-tariby dia azo apetraka na ovaina arakaraka arak'izay ilaina; 3. Manana ny asany rehetra amin'ny telefaona tsotra izy io; 4. Fanoherana manimba be, fahamendrehana avo lenta, tsy tantera-drano sy hamandoana; 5. Azo ampiasaina amin'ny tontolo tsy misy mpiambina na olona;
2 examples Ohatra fampiharana
1. Ampiasaina miantso vonjy amin'ny làlambe; 2. Ampiasaina amin'ny fanaovana antso fizarana amin'ny lalamby na metro; 3. Ampiasaina amin'ny masinina mpamadika banky sy tobin-tseranana an-tanàna hiantsoana fitarainana sy hanamboarana antso; 3, Fampidirana fiasa 1. Hot-service ho an'ny mpanjifa manokana; 2. Fandraisana andraikitra mandeha ho azy. Asandrato ny telefaona finday, tsy mila manindry bokotra iray, hamindra anao ho any amin'ny "Ivotoerana Serivisy ho an'ny mpanjifa" aorian'ny 3 ~ 5 segondra; 3. Fomban'ny hitsin-tanana. Azonao atao ny misafidy ny bokotra rehetra amin'ireto menio manaraka ireto arakaraka ny filanao;
Ningbo Joiwo dia manam-pahaizana manokana amin'ny telefaona indostrialy mandritra ny 15 taona mahery.
Ary mikaroka telefaona vaovao mifototra amin'ny telefaona indostrialy 3G / 4G / 5G izahay. Ireo telefaona ireo dia azo ampiasaina ho an'ny tionelina, ranomasina, oi, gazy, dock, zavamaniry simika, simenitra, voafonja, ivelan'ny trano sns.
Miresaka aminay momba ny fananganana ny rafitra telefaona telecom isan-karazany.
inona ny olana tokony hodinihin'ny tsirairay rehefa mividy telefaona misy porofo mipoaka？